China Ihowuliseyili Glitter Water activated Magic Adhesive Eyeliner eneebhokisi zeeleyibheli zabucala mveliso kunye nabenzi | Weiti
Ihowuliseyili Glitter Water activated Magic Adhesive Eyeliner eneebhokisi zeeleyibheli zabucala
I-1, 2 kwi-1 ipeni yolwelo oluzenzekelayo
I-3, eyeliner yethu yomlingo yeyokuncamathelisa imivumbo yobuxoki
4, ifomula entsha yeBrand enobuchwepheshe bokuncamathela
Iphepha lokucoca i-eyeliner
I-Kalocils 2 kwi-1 ye-1 ye-Self-Adhesive Liquid eyeliner yifomula entsha enetekhnoloji yokuncamathelisa, ukuzimela, ekhuselekileyo kunye nokuthantamisa, akukho monakalo emehlweni akho, ivumba elungileyo, egudileyo kunye neyendalo, engenamanzi kunye ne-sweatproof, lolona khetho lufanelekileyo imivimbo, ikunike amava amangalisayo. I-Eyeliner yethu yomibini yeyokuncamathelisa iglu kunye ne-eyeliner, ibambe ngokuqinileyo imivimbo, unganxiba i-eyelashes nge-eyeliner yethu yomlingo endaweni yeglu okanye i-eyeliner yemagnethi.
Iyahlaziywa kwaye kulula ukuyifaka
Elula ukufaka imivumbo malunga nemizuzwana engama-30. Gcina ixesha lakho kwaye wenze lula amanyathelo. Inqaba iyakukhulula kwixhala kunye neentloni zokuwisa i-eyelashes. Amanyathelo ama-3 alula wokubeka iinkophe kwaye kufanelekile kubaqalayo! Hlanganisa i-liner, uze uzobe i-liner kunye ne-curl line curl, ekugqibeleni ubeke i-lashes. Ingasetyenziselwa nayiphi na imivumbo engeyonyani.
Uyifaka njani i-eyeliner yokuncamathela?
1. Hlanganisa i-eyeliner amaxesha angama-10-20 ngaphambi kokusetyenziswa.
2. Zoba i-eyeliner ecaleni kwesiseko seenkophe zakho.
3. Bambelela iinkophe nge-tweezers zakho.
4, Cofa ngobunono iinkophe kwindawo yamehlo kwaye ugqibe ukunxiba.
Isebenza njani eyeliner yokuncamathela kwe-eyeliner?
Imveliso isebenza ngokubeka umgca othe tye kunye nokuchaneka kokubambelela (kunye nombala, ukuba usebenzisa mnyama), ethi ibekho emva kwemizuzwana embalwa. Naluphi na uhlobo lwemivumbo engeyonyani inokuthi ibekwe ngaphezulu komgca wobungqina be-smudge, apho iyakuhlala ibekwe njenge-glue (kodwa kwabo kuthi bahlala bechaphazeleka ngomngeni, ngaphandle komyalezo omncinci kunye neminwe enamathelayo).
Iibhokisi zeeleyibheli zeleyibheli yesiNtu
Sineebhokisi ezahlukeneyo zokupakisha ze-eyeliner, iimeko ze-eyeliner, njl. Endaweni yoko, inkonzo yelebheli eyenzelwe wena iyafumaneka kuthi. Ngokwesiqhelo, kwiibhokisi zesitokhwe esele zilungile okanye amatyala, siyaxhasa ukuprintwa kwe-UV ye-3D, ukuba ufuna imilo eyahlukeneyo kunye nobungakanani beebhokisi, inokuba yeyakho. Into ekufuneka uyenzile kukuthumela i-logo kunye nombala owufunayo. Ngokuqinisekileyo siya kwenza ezona mpahla zigqibeleleyo zokwenza i-eyelashe.
Egqithileyo Ixabiso elininzi ngamaxabiso abucala elebheli yomtya Lashes 25mm Mink Umthengisi weeyelash
Okulandelayo: I-OEM ye-OEM eshushu ethandwayo yeLiso leLeyile elingamanzi eliManzi le-Eyeliner Adhesive Glue Pen
Professional Bukanqinishe Black ezambiwa okungangenwa ...
I-OEM yeLebheli yaManzi yaManzi eViweyo yeSitampu ...
2-in-1 Ukusebenzisa Lashes False Ulwelo Eyeliner Pr ...
Label Super Strong okungangenwa Waterel Private ...
Imivimbo yamehlo, Izandiso zeEyelash, Imivimbo ye-mink, I-liner yamehlo, Abathengisi bee-Eyelash, eyeliner,